TAOMBAOVAO MALAGASY FAHA MPANJAKA
Rehefa nanjaka tao Ambohitrabiby Ralambo (1575-1610), dia novany ho fankalazana ny fiafaran’ny taona itsahina sy fandraisana ny taona vaovao vao mitsidika ny Fandroana.
Fiandohan’ny volana Alahamady rahateo no andro nahaterahany ka izany no isany nisafidianany io volana io ho fiandohan’ny taona.Mbola izy koa no voalaza,ara-lovan-tsofina,fa nampianatra ny teto Imerina nihinana ny hena omby(jamoka taloha) voalohany ary dia io biby io no novonoiny nataony sorona rehefa androm-pandroana.
Ny fandroana dia andro fidiovana sy fifamelan-keloka ary fisantarana .Misaika (mandro) amin’ny rano ny mpanjaka sy ny vahoaka. Manolotra «vola tsy vaky»(ariary) hatao «Hasina» ny vahoaka.
Ny Mpanjaka kosa,setrin’izany,mamono omby matavy maro hampifaliana ny vahoaka.Io no atao hoe «Jaka».
Raha vao miposaka ny masoandro ny marainan’ny Fandroana dia miara-mihinana ny sakafo santatra atao hoe “Tatao”, ny Mpanjaka sy ny vahoaka ka ny vary mena atao sosoa notondrahan-dronono sy tantely ampiarahina amin’ny “mialin-taona”no hanina amin’izany.
Ny mialin-taona dia hena omby nandrahoina tamin’ ny fandroana tamin’ ny taon-dasa (notehirizina tanaty vilany nongo).
Loarana eo ambony ravin’akondro io sakafo io ka akarina eo ambony loha dia mirary soa toy izao ny Mpanjaka : «Sambasamba Andriamanitra Andriananahary, ho tratry ny arivo taona mitsingerina anie aho ka hiara-mijaka amin’ny vahoaka… ».
Dia mamaly ny vahoaka manao hoe : «Trara antitra ianao ry Mpanjaka,aza marofy !» Mifanatera amin’ny ambany lanitra !
Aorian’izay dia mamono omby «volavita» sy «malaza» ny Mpanjaka hatao jaka ary dia mifaly mandritra ny andro maro ny rehetra.
Nodidian’ny Mpanjaka ho andro tsy iasana ny andro fandroana fahizay.
Ny endriky ny taombaovao Malagasy fohazina ankehitriny dia ahitana taratra ny sasan-tsasany amin’ireo fombafomba fanao tamin’ny Fandroana fahizay.